CNC lathe igwe n'ihi na ire, Metal ọnwụ, China emeputa & soplaya
Ị nọ ebe a: Ulo1 / CNC lathe igwe n'ihi na ire, Metal ọnwụ, China emeputa & soplaya ...
AKWECKWỌ AKW LKWỌ AKW LKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ
CNC lathe igwe bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na i nwere iberibe na mkpa ka a ga-uka-emepụta. Ọ nwere ike na-akpaghị aka na-ejikwa workpiece adiana na ngwá ọrụ ije site na NUMERICAL akara usoro, ọ dịghị mkpa iji aka ịchịkwa. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ọtụtụ mgbanaka nke nha dị iche iche na-arụ ọrụ na ogwe osisi, lathe nwere ike ịhazi mgbanaka na-akpaghị aka site na itinye nha nha na koodu mwepụ na usoro ihe omume. Mgbe emechara nhazi, ị nwere ike iji aka dochie ihe eji arụ ọrụ ọhụụ, ma ọ bụ nwee ike ịhazi ya na akpaka nri manipulator (robot), na-emeziwanye arụmọrụ arụmọrụ.
Nhọrọ nke CNC lathe na-adabere n'otú arụ ọrụ ahụ na ụdị nhazi ahụ, dịka ogo nke ngwa ngwa akpaaka nwekwara ike ịhazi ya na onye na-arụ ọrụ na ngwa ngwa mwepu akpaaka. Anyị Tsinfa nwere CNC lathe igwe, oke nkenke, ezi nkwụsi ike, na ọtụtụ dị iche iche zuru ezu, dị mma maka ịzụta nkwụsị gị.
CNC lathe igwe LTK6136
Machining n'obosara: 300 / 360mm
workpiece ogologo: 500/ 750 / 1000mm
CNC lathe igwe LTK6140
Machining n'obosara: 400mm
750/1000 / 1500/2000 / 3000mm
CNC lathe igwe LTK6150
Machining n'obosara: 500mm
CNC lathe igwe LTK6180
Machining n'obosara: 800mm
Kedu ihe bụ CNCLathe igwe?
CNC lathe bụ igwe eji egbusi igwe eji arụ ọrụ nke ọma site na mmemme CNC. nke a na-ejikarị eme ihe, nwere ike ịtụgharị gburugburu, oghere, na njedebe.
Ná mmalite nke ojiji anyị kwesịrị ịtọlite ihe nhazi ọrụ ọrụ, Clamping workpiece, mgbazi, nhazi ngwaọrụ. Manual incremental ije, na-aga n'ihu ije ma ọ bụ ojiji nke akwụkwọ ntuziaka diski na-akpụ akpụ lathe.Tee na mmalite nke usoro ihe omume na mmezi na ngwá ọrụ akwụkwọ. Malite ịhazi ndepụta ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ ngwa ngwa.Feed ọnụego mgba ọkụ nwere ike iji dozie ndepụta ọnụego n'oge nhazi. N'oge nhazi, enwere ike pịa bọtịnụ FEEDHOLD, enwere ike ịkwụsị mmegharị ndepụta, a ga-ahụ ma ọ bụ jiri aka tụọ ọnọdụ nhazi. Pịa bọtịnụ CYCLESTART ọzọ iji maliteghachi ọrụ. Iji hụ na mmemme ahụ ziri ezi, ekwesịrị ịtụle ya ọzọ tupu ịhazi ya.
CNC lathe machining nkenke dị elu, nwere ike na-akpaghị aka ịgbanwe ngwá ọrụ, Na-aga n'ihu mmezu nke otutu Filiks. Ọ bụ ihe dị oké mkpa ngwá ọrụ na metal ọnwụ. Ọ bụ ngwa dị mkpa maka nkenke ogbe na ịchacha ọla.
Ntugharị igwe na-arụ ọrụ site na njikwa usoro CNC, nri akpaka, kwesịrị ekwesị maka nhazi nhazi.
Bedta ụra, adaba mgbawa, mgbochi ekwe na-agbagọkwa ikike bụ ike. Irè ojiji nke ohere, ukwuu belata ụgbọelu na mpaghara nke igwe.
Nnukwu oghere oghere CNC nke na-eme ka eriri lathe nwere ike na-akpaghị aka ma na-arụ ọrụ nke ọma mezue ịcha ụdị ụdị ọkpọkọ kwụ ọtọ na eriri ọkpọkọ.
Add C axis na ike isi, na mbịne milling compound function, akwa ogo akpaaka.
Dika ntuziaka nke spindle, enwere ike kee ya: CNC lathe lathe na CNC kwance lathe
Dabere na ụdị ụzọ ndu, enwere ike kee ya: usoro CNC usoro ụzọ lathe na laden okporo ígwè lathe.
Dabere na tilt nke bed, nwere ike kere n'ime: CNC ewepụghị bed lathe na CNC slanting bed lathe.
Dị ka nhazi usoro na-ekewa: General CNC lathe, CNC anwụrụ eri lathe na-atụgharị igwe
Ngwa nkeCNCLathe igwe?
CNC lathe na-arụ ọrụ a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na mmepụta na ịmepụta nke cylinder, okporo ụzọ njikọ ụgbọala, na-ebu na wheel wheel. A na-ejikwa ya na ndozi nke ụgbọ okporo ígwè na ụlọ ọrụ mmanụ ala metụtara mmịpụta mmanụ, pipeline kemịkal na nyocha ala. Na n'ichepụta ihe, ngwaike, akụrụngwa ọgwụ, ụlọ ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ kwesiri iji CNC lathe.